Material kuti PVC zvemapuranga gabion PVC zvemapuranga gabions, imwe mhando waya pajira riya bhokisi, wakaumbwa rinorema hexagonal waya netting kuti rakarukwa ne simbi waya. PVC zvemapuranga gabions kunze dhayamita kubva 3.0mm kusvika 4.5mm, uye dhayamita kuti nomukombero waya kana unopinza waya imwe waya geji mukobvu kupfuura vanhuwo pajira riya waya. PVC zvemapuranga gabions wakaumbwa epurasitiki zvemapuranga kwakakurudzira simbi waya: yepamusoro yakaderera kabhoni simbi waya, isu putira PVC kudzivirira rukoko pamusoro pemvura kwakakurudzira simbi waya, uye ipapo micheka nayo ...
Supply Mano: 500 Set / Sets por Day
Material kuti PVC zvemapuranga gabion
PVC zvemapuranga gabions , imwe mhando waya pajira riya bhokisi, wakaumbwa rinorema hexagonal waya netting kuti rakarukwa ne simbi waya. PVC zvemapuranga gabions kunze dhayamita kubva 3.0mm kusvika 4.5mm, uye dhayamita kuti nomukombero waya kana unopinza waya imwe waya geji mukobvu kupfuura vanhuwo pajira riya waya.
PVC zvemapuranga gabions wakaumbwa epurasitiki zvemapuranga kwakakurudzira simbi waya: yepamusoro yakaderera kabhoni simbi waya, isu putira PVC kudzivirira rukoko pamusoro pemvura kwakakurudzira simbi waya, uye ipapo micheka ndokuadira hexagonal waya netting kusanganisira nokurondedzerwa zvose. This PVC kuchengetedzwa rukoko kunogona kusimbisa kudzivirira dzakakwirira kusvibiswa kwezvakatipoteredza. Zvichakadaro tinogona kusarudza mavara akasiyana kuti anoenderana nawo akapoteredza kwezvakatipoteredza.
The kuipa nokurondedzerwa kuti PVC zvemapuranga gabion
kuvhura pajira riya
Kazhinji dhayamita kubva 2.5mm kusvika 3.4mm
Other nokurondedzerwa kubva vatengi iripo.
Kushanda PVC zvemapuranga gabions
Gabions zvinoshandiswa ezvinhu akawanda kusanganisira Kudzikamiswa enyika rwokufamba kukurwa kwevhu, rwizi kuzvidzora, reservoirs, Canal mhararano inonzi mapindu uye ukaramba masvingo, etc.
Features uye zvakanakira PVC zvemapuranga gabions
PVC zvemapuranga gabions anogona kutakura simba dzegirini uye extruding simba uye kuchengeta chimiro chayo. Gabions zviri nyore zvokuti yokugadza kuti hapana chiitiko zvinokosha kuwana mugumisiro wakanaka. PVC zvemapuranga kunze kwakakurudzira simbi waya, PVC zvemapuranga gaions nani mune ngura resistence, antioxidation, mukurumari, panguva iyoyo PVC zvemapuranga gabion ndiyo yakanaka kupfuura vasiri PVC zvemapuranga. Tinogona kuukurira pamwe yakapoteredza zvakatipoteredza uye kuti vanhu vakasununguka.
Previous: Kwakakurudzira Gabion Mesh
Kwakakurudzira Welded Gabion Mesh